म यस क्षेत्रको कायापलट गर्नेछु – तुलसी यादव
कल्याणपुर, २६ कार्तिक ः सिरहाको क्षेत्र नंं ४ को ख प्रदेशवाट एमाले पार्टीका नेता तुलसी यादव प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार भएका छन् । उी वाम गठबन्धनका तर्फवाट संयुक्त उम्मेदवार पनि हुन् । प्रष्टवक्ता , मिजासिलार फर्साईलो स्वभावका नेता तुलसी यादव अहिले त्यस क्षेत्रमा चर्चाको शिखरमा छन् । जुन गाउँमा गए पनि तुलसी ...तुलसी भन्ने चर्चा छ । समाजसेवी चरित्र र व्यवहारका धनी तुलसी समाजमा ज्यादू लोकप्रीय छन् । उनको एमालेमा आगमन हुनसाथ उनको लोकप्रीयतालाई हेरेर पार्टीले टिकट दिएको हो । चुनाव जित्ने र जनताले अत्यधिक बहुमतले उनलाई जिताउने कुरामा तुलसी यादव ढुक्क छन् । तुलसी यादवसंग अनुकल्प दैनिकले गरेको कुराकानीको अंश प्रस्तुत छ ....
प्रश्न ः राप्रपा छोडेर एमालेमा आउन साथ टिकट पाउनु भयो त ?
उत्तर ः पार्टी र नेता दुवै एक अर्काका आश्रित हुन्छन् । पार्टी र नेता विच सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ । कहिलेकाही पार्टीको बलले उम्मेदवारले जित्छ तर कहिलेकाही उम्मेदवारको लोकप्रीय छवीले पार्टीले जित्छ । यो क्षेत्र अर्थात सिरहाको ४ नंं क्षेत्रको ख प्रदेश एमालेको मजवुत संगठन भएको क्षेत्र हो । तर पार्टी अनुसार उम्मेदवार मजवुत नहुँदा सफलता नपाएको हो । उता म राप्रपा मा थिए । मेरो सामाजिक प्रतिष्ठा जति नै धेरै भए पनि पार्टी कमजोर थियो । तर यस पटक एमालेको मजवुत संगठन र मेरो उपस्थिति दुवैको मेल भएको छ । म एमालेमा आएर उत्साहित छु । एमालेको कार्यकर्ता पंक्ती मलाई पाएर उत्साहित छ । एमाले र मेरो मिलनले यस क्षेत्रमा नयाँ ईनर्जी पैदा गरेको छ । त्यसकारण पार्टीले मलाई टिकट दिएको हो । यसले सुखद नतिजा ल्याउँछ ।
प्रश्न ः तपाई प्रदेश सभाको उम्मेदवार त हुनुभयो तर जित्ने आधार के छ त ?
उत्तर ः मेरो जित सुनिश्चित छ । किनकी यस क्षेत्रमा एमालेको मजवुत संगठन छ । त्यसमाथी वाम गठबन्धनले गर्दा माओवादी केन्द्रको पनि मत थपिन्छ । मसंगै राप्रपाका थुप्रै साथीहरु एमालेमा आएका छन् । त्यो मत पनि थपिन्छ । मेरो समाजसेवी छवि र लोकप्रीयताको मत पनि थपिन्छ । नरहा गाउँपलिकामा एमालेले स्थानीय निर्वाचन जितेको छ । त्यहाँ एक प्रकारले हाम्रो भोट बैंक नै छ । विष्णुपुर गाउँपालिकामा पनि एमालेले सम्मानजनक मत ल्याएको छ । कल्याणपुर नगरपालिकामा एमाले र माओवादी केन्द्रको मत एक ठाउँ पार्दा हामी हाराहारीमा छौ । मिर्चैया नगरपालिकाको एउटा वडावाट हाम्रै बहुमत मत आउँछ । वाम गठबन्धन बनेकाले जनता वाम शक्ति प्रति उत्साहित छन् । यी त भए हाम्रा सवल पक्ष । अव विपक्षीहरुको कमजोर पक्ष पनि हाम्रा लागि सवल पक्ष बनेर आउँछ । विगतमा यहाँवाट जितेका फोरम र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले एउटा सिन्को भाँच्ने वरावर पनि काम गरेनन् । उनीहरु देखि जनता रुष्ट छन् । त्यसकारण पनि मेरो जित सुनिश्चित देखिन्छ । मेरो जितसंगै वाम गठबन्धनका संयुक्त उम्मेदवार अजय शंकर नायकले पनि यस क्षेत्रवाट अधिक मत ल्याउने निश्चित देखिन्छ । वाम शक्ति यस क्षेत्रमा अव उदायो भन्ने बुझ्नुस् ।
प्रश्न ः तपाईले प्रदेश सभामा जिते पछि यो क्षेत्रको विकासको लागि के के गर्नुहुन्छ ?
उत्तर ः मुख्य कुरा त पार्टीको घोषणा पत्र छ । घोषणा पत्रमा पार्टीले कवुल गरेको छ के के बिकास गर्ने भनेर । पार्टी घोषणा पत्र अनुसार बिकासका कामहरुलाई हामी गति प्रदान गर्ने नै छौ । तर व्यक्तिगत मेरो तर्फवाट पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि खास खास क्षेत्रमा विशेष प्रयासहरु हुने छ । सर्वप्रथम त ः मिर्चैया कल्याणपुर सिरहा सडकलाई दुई लेनको पक्की सडक बनाउन म कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । यो सडक प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्ष भित्र संपन्न गराउने छु । अर्को कुरा कमला नदीको किनारमा भएको कारण हरेक वर्ष असार , साउन र भदौ ३ महिना यस क्षेत्रका जनता बाढीको डरले त्राही त्राहीमा हुन्छ । कमला नदीको बाँध फुट्ने डरले रातमा सुत्न सक्दैनन् । कति पटक बाँध फुटेर जनधनको निकै क्षति भएको छ । मैले जिते भने कमला नदीको बाँध फुट्ने खतरालाई सदाका लागि हटाई दिन्छु । कमला नदीको बाँध मजवुत तरिकाले बाध्ने कार्य गराउने छु । तेश्रो कुरा कल्याणपुर नगरपालिका नगर घोषणा भए पनि मुलत यो वजारको स्वरुप ग्रामिण वजारमै सिमित छ । यो वजारलाई व्यवस्थित तथा आधुनिक शहरीकरण गर्न नाला, ढल, सडक, वत्ति , सडक वत्ती र उद्योग स्थापना तर्फ कदम चाल्ने छु । यस क्षेत्रमा कृषकहरु सिंचाई सुविधा विना निकै पिडामा छन् । प्रत्उक १० विगहा जमिनमा एउटा वोरिङ्ग पर्ने गरी सिंचाई सुविधाको विस्तार गर्नेछु । कल्याणपुर नगरपालिकामा स्नातक तहसमम पढाई हुने गरी एक क्याम्पसको स्थापना मेरो मुख्य लक्ष हुने छ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसंग समन्वय गरी हरेक दलित गरीवलाई जनता आवास मार्फत घर निर्माण गराउने छु । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा ल्याउने र विस्तार गर्ने भनेको पूर्व पश्चिम रेल मार्गले कल्याणपुर शहरलाई छुने गरी व्यवस्था मिलाउने छु । यी भए प्रमुख कार्यहरु । साना कार्यहरुलाई समेटेर म एउटा छुट्टै स्थानीय घोषणा पत्र जारी गर्नेछु र त्यसलाई पुरा पनि गर्ने छु ।
प्रश्न ः तपाईलाई एमालेका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कति सहयोग र साथ छ ?
उत्तर ः एमाले मात्र होईन पुरै वाम गठबन्धनको भरपुर साथ सहयोग छ मलाई । वाम गठबन्धन भित्र उम्मेदवारलाई लिएर वा अन्य कुनै कारणले कुनै विवाद छैन । हजारौ हजार वाम गठबन्धनका साथीहरु मलाई चुनाव जिताउन अहोरात्र खटिनु भएको छ । पार्टीको जिल्ला कमिटी लगायत केन्द्रवाट पनि भरपुर सहयोग र समर्थन पाएको छु । मेरो उममेदवारीका कारण पुराना कतिपय विवादहरु प्नि स्वत मिलेर गएको छ । वस अव निर्वाचनको दिनको प्रतिक्षा छ । जनता मलाई भोट हाल्न व्यग्र छन् ।